Shan qof ma goyn karto hanaanka doorashada dalka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Iyadoo welli la sugayo nooca doorasho ee dalku geli doonto, waxa isa soo taraya in aan dib loogu noqon sheekada shan qof oo gooya danta qaranka ayadoo laga boodayo barlamaanka. ” Waa dhaqan foolxun oo aan ku naqaanay labadii hogaamiye ee hore ee Xasan Sheekh Sheekh ugu dambeeyay ayadoo gebi ahaanba barlamaankii la tuurey ayuu yiri Cali Calasow.
Beesha lixaad ama kuwa loogu yeero beesha caalamka ayaa dabada ka riixaya in barlamaanka daaqada laga saaro, oo shan maamul jufeed ama sadex ka mida 4.5 gacanta loo geliyo hanaanka doorasho.
” Farmaajo inkastoo maalmahan dambe uu ka leexanayo sidii lagu yaqaanay sanadihii hore ee ahaa go’aan qaadasho arimaha masiiriga dalka sida siyaasad xora oo dalku yeesho ayaa si aan la fileynJabuuti loogu qabtey shir Maraykanku dabada ka riixayo oo ujeedadiisu tahay in maamulkan Muuse Biixi aduunka la baro. Ugu dambeyna Taywaan gacanta loo saarayo. ayuu raaciyay Cali Calasow.
Si kastaba ha ahaatee waa nasiib daro haddii barlamaanka laga boodo oo dalka loo gacan geliyo masiirkiisa shan qof oo matala dano shisheeye ayuu qabaa Xuseen Warsame.
Dastuur dhoodhoobka, federaalka, iyo aqalka sare
Waxaa xusid mudan in hagar-daamada dalka haysata ay geliyeen hanaanka sharciga dalka oo laga booday kadib markii fadhiiyada dalka gacanta loo geliyay ay gacanta u geliyeen kooxihii keenay dastuur dhoodhoobka, goboleysiga iyo aqalka sare.
”Waa in dawladu la timaado nidaamka doorasho kadibna marisaa hanaanka baarlamaan ee dalka iyo sharciga dalka u yaala inta kuwa sheeganaya inay qayb ku leeyihiin dalka ayna qas gelinin hanaankaas ayuu yiri Cali Calasow. Waxa durba socda in Maraykanku wado is afgarad u dhexeeya maamul jufeedyada.